सोलुखुम्बु । सगरमाथाको उचाइ नाप्नका लागि खटाइएको नापी विभागको टोली बुधबार बिहान ३ बजेर १५ मिनेटमा सगरमाथा शिखरमा पुगेका छन् । विभागका उपसचिव खिमलाल गौतमको नेतृत्वमा टोली शिखरतर्फ गएका थिए । टोलीका सदस्य रविन कार्की सहित क्लाइम्बिङ गाइड छिरिङजाङबु शेर्पा लगायतले शिखरमा पुगेर जिएनएनएस जिपिएस सेट गर्ने काम सम्पन्न गरेको विभागको टोलीलाई आरोहण व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको पिक प्रमोशन प्रालिका निर्देशक आङबाबु शेर्पाले बताए । उनीहरु फर्केर साउथकोल आइसकेका छन् । बिहीबारसम्ममा आधारशिविर आइपुग्ने पिक प्रमोशनले जनाएको छ । शिखरतर्फ जानुअघि टिम लिडर गौतमले कम्तिमा आधाघण्टा शिखरमै काम गर्नुपर्ने भएकोले राति नै शिखरमा पुग्नुपर्ने चुनौती रहेको बताएका थिए । शिखरमा जिपिएस… बाँकी »
एक हप्ताभित्र दोस्रोपटक सगरमाथा चुम्दै कामिरिताले तोडे आफ्नै रेकर्ड
काठमाडौं, ७ जेठ । कीर्तिमानी आरोही कामिरिता शेर्पाले सगरमाथाको २४ औं सफल आरोहण गर्दै नयाँ कीर्तिमान राखेका छन् । एक साताअघि आफैले राखेको २३ औं पटकको कीर्तिमान उनले तोडेका हुन् । मंगलबार बिहान ६स्३८ मिनेटमा कामिरिताले २४ औं सफल आरोहण सम्पन्न गरेको सगरमाथा आधार शिविरबाट सम्पर्क अधिकृत ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनी अघिल्लो बुधबार २३ औंपटक चुचुरोमा पुगेका थिए । श्रेष्ठका अनुसार मौसम अनुकूल भएकाले मंगरबार बिहानबाट आरोहीहरु चुचुरोतर्फ लागेका छन् । मंगलबार मात्र १ सय २२ आरोहीले आरोहण गर्ने तालिका मिलाइएको छ । बुधबार २ सय ९७ र बिहीबार १ सय ७२ जना आरोहणको लाइनमा छन् ।… बाँकी »
कामिरिता शेर्पाले २३ औं पटक सगरमाथा चढेर बनाए नयाँ कीर्तिमान
काठमाडौ – कामिरिता शेर्पाले २३ औं पटक सगरमाथा आरोहण गरेर नयाँ विश्व कीर्तिमान बनाउनुभएको छ । उहाँ बुधबार बिहान ७ बजेर ५० मिनेटमा सगरमाथाको चुचुरोमा २३ औँ पटक पुग्न सफल हुनुभएको हो । सोलुखुम्बुको थामे गाउँमा जन्मिनुभएका कामिरिताले आफ्नै नाममा रहेको सर्वाधिक पटक विश्वको सर्वोच्च शिखर आरोहण गर्ने कीर्तिमान सुधार गर्नुभएको हो । लामो समयदेखि आरोहण क्षेत्रमा रहेका ४९ वर्षीय शेर्पाले आफूले कायम गरेको विश्व रेकर्ड आफैँले तोड्दै नयाँ विश्व कीर्तिमान कायम गर्न सफल भएका हुन् । कामीरिता शेर्पा र ओङ्दी शेर्पाले सेभेन समिट्स ट्रेक्समार्फत आरोहण गरेका हुन् । सन् १९९४ मा पहिलोपटक सगरमाथाको आरोहण गरेका कामीरिताले आरोहणअघि सञ्चारकर्मीसँग कुरा… बाँकी »
विराटनगरका ४३ वर्षे राजीवले जिते ‘को बन्छ करोडपति’मा १ करोड
शिखरपोष्ट डेक्स काठमाडौं, २९ बैशाख २०७६ । मोरङ विराटनगरका ४३ वर्षे राजीव जैनले ‘को बन्छ करोडपति’ कार्यक्रममा १ करोड रुपैयाँ जितेका छन् । शनिबार र आईतवार प्रसारण भएको कार्यक्रममा जैनले १५ औं प्रश्नको रुपमा भन्ने प्रश्नको सही उत्तर दिँदै १ करोड रुपैयाँ जितेका हुन् । महानायक राजेश हमालले सञ्चालन गर्ने उक्त कार्यक्रममा १ करोड रुपैया जित्ने उनी पहिलो व्यक्ति हुन् । नेपालमा सञ्चालित पहिलो संकरणमा यस अगाडि ६ लाख ४० हजार मात्रै जित्न सफल भएका थिए । दिल्ली विश्वविद्यालबाट फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टमा सन् २००३ एमबीए सकाएर उनी अहिले काठमाडौंमा व्यापार गर्छन् । परिवारसँग विगत १० वर्षदेखि ललितपुरको सानेपामा बस्दै आएका… बाँकी »
काठमाडौँ । होटल संघ नेपाल(हान)को अध्यक्षमा होटल अन्नपूर्णकी सिर्जना राणा निर्वाचित भएकी छिन् । संघको ४६ औं वार्षिक साधारण सभाबाट चयन भएको नयाँ कार्यसमिति विहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक समारोहका बीच घोषणा गरिएको हो । साधारण सभाले प्रथम उपाध्यक्षमा एयरपोर्ट होटलका विनायक शाह, द्वितीय उपाध्यक्षमा होटल साङ्ग्रिलाका प्रबिनबहादुर पाण्डे, महासचिवमा काठमाडौँ प्रिन्स होटलका साजन शाक्य र कोषाध्यक्षमा होटल बैशालीका विशालकुमारलाई निर्वाचित गरेको छ । त्यसैगरी सदस्यहरुमा निर्वमान अध्यक्ष अमरमान शाक्य(अमर होटल), सोल्टी होटलका दिनेशबहादुर विष्ट, ओरियन्टल÷र्याडिशन होटलका बिधाता श्रेष्ठ, होटल हिमालयका दिनेश तुलाधर, होटल शंकरका विनोदशंकर श्रेष्ठ, बाराही रिसोर्टका विप्लब पौडेल, ड्रिमल्याण्ड गोल्ड रिसोर्टका गोपाल राना, शम्बाला होटलका टेस्टेन, होटल कमलका… बाँकी »
बाबुराम-उपेन्द्र एकता, करिश्मा मानन्धर किन बेपत्ता !
काठमाडौं, २३ बैशाख । नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालबीच आज एकता घोषणा हुँदैछ । एकतापछिको पार्टीको नाम, पदाधिकारी र केन्द्रिय सदस्यहरुको नामसमेत टुँगो लागिसकेको छ । तर, नयाँ शक्तिमा सक्रिय रहेकी नेतृ करिश्मा मानन्धर भने एकता प्रक्रियामा सामेल नभएको खुलासा भएको छ । नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले फोरमसँगको एकता टुँगो लगाउन डाकेको केन्द्रिय समितिको बैठकमा करिश्मा उपस्थिति नभएको स्रोतको दाबी छ । के साँच्चै करिश्मा बाबुरामसँग रुष्ट भएकी हुन त ? यो भने अझैपनि चासोको विषय छ ।
आधार शिविर घाँसे मौदान थियोः कान्छा शेर्पा
डोमा शेर्पा १९५३ मा पहिलो पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने टिमका एक जिवित व्यक्ति कान्छा शेर्पा अहिले ८७ बर्ष पुगेको छ , उनी ३५ जना टिम मध्येको एक जिवित व्याक्ति हुनुहुन्छ । कान्छा शेर्पा फाउन्डेशनको स्थापना गरी दुर्गम भेगका बालबालिकाहरुलाई शिक्षा स्वास्थ्य र जलजायु परिर्वतनसम्बन्धी कार्यहरु गर्दै आउनु भएको छ । कान्छा शेर्पा २० बर्षको उमेर हुदा घरको अािर्थक अवस्था सम्हाल्न कामको खोजीमा भागेर दार्जिलिङ पुगेको थियो । दार्जिलिङमा उनको भेट स्वा. तेन्जिङ नोर्गे शेर्पासगँ भयो । उनले ३ महिना दार्जिलिङमा नै काम गरे । एकदिन तेन्जिङले अव चोमालोङ (सगरमाथा) मा जानु पर्छ भनी सुनाए । कान्छालाई पनि जान मन लाग्यो… बाँकी »